यौ,’न सम्पर्क गर्दागर्दै बाल्कोनीबाट एक महिला ख,’सिन्, कार भाँ,’चियो !(भिडियो सहित) - Thulo khabar
यौ,’न सम्पर्क गर्दागर्दै बाल्कोनीबाट एक महिला ख,’सिन्, कार भाँ,’चियो !(भिडियो सहित)
काठमाडौं : शा,’रीरिक सम्बन्धको क्रममा एक महिला बा,’ल्कोनीबाट तल पार्किङमा राखिएको कारमाथि ख,’सिन् । महिला कारको छतमा प,’छारिँदा कारको छत भाँ,’चियो तर महिला भने बाँ,’च्न सफल भएकी छिन् ।
यी महिलाले आफ्ना प्रेमीसँग ता,’इवानको ता,’इपेइमा एक अपार्टमेन्टमा श,’नरीरिक सम्बन्ध राख्दै थिइन् । यस क्रममा अ,’चानक उनी चि,’प्लिएर तल ख,’सेकी हुन् ।द सनको रिपोर्टअनुसार यो सेप्टेम्बर ५ को भएको बताइएको छ । घट’ना सी,’सीटिभी क्या,’मेरामा रेकर्ड भएको छ ।
उनलाई पि,’ठ्युँमा सामान्य चो,’ट लागेको बताइएको छ । उनलाई पूरै निको हुन केही समय लाग्ने र अहिले उनको अवस्था स्थिर रहेको समाचारमा जनाइएको छ । यो जोडीले कारमा भएको क्ष’तिको पैसा पनि ति,’र्नुपरेको थियो । यो कार त्यही अपार्टमेन्टमा बस्ने एक छिमेकीको थियो ।